Somaaliyaatti Haleellaa Al-shabaabin Namoonni 12 Ajjeefaman
Adoolessa 23, 2018
Somaaliyaa, kutaa Jubaa gad-jallaa keessatti, humnoonni Al-shabaab maadhee waraanaa Somaalee irratti haleellaa geggeessaniin yoo xiqqaate namoota 12 tu ajjeesame.
Aangawoonni VOAf akka ibsanitti, ka magaalaa buufata doonii, Kismaayyoo irraa kiiloo-meetira shantama irratti argamu, mooraa waraanaa “Saanguunii” irratti geggeessame – haleellaan kun.
Ajajaan murna waraanaa Somaaliyaa, mooraa Saanguunii keessaa – Muktaar Abdii Mohammed, humnoonni isaanii konkolaatota dhukaatotaan guutaman lama dursanii arganii, otuu isaan moraa waraanaa sana hin dhaqqabiin dhoosan – jedhan.
Kana malees, hidhattoonni Al-shabaab saddeettamaa haga dhibbaa ta’an moraa waraanaa sana irraa gama kaabaatiin itti dhufanii haleellee banuu isaanii fi wal-waraasi cimaan geggeessamuu isaa dubbatan – Ajajaan waraanaa kun. Waa’ee haleellaa sanaa dursanii odeeffannoo argachuu isaaniillee dubbatu.
Akka aangawoonni Somaaliyaa jedhanitti, waraanaa Somnaaliyaa irraa afur tu ajjeesame. Gama riphxee-loltoota Alshabaab tii immoo, shofeerota konkolaatota dhuka’aa fe’atanii dho’anii lamaan dabalatee yoo xiqqaate saddeet tu ajjeesame.